cademic Writing Course ပ်ိတ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြီးစီး။ - Arakan Student Monks Association
cademic Writing Course ပ်ိတ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြီးစီး။
1:52 AM ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း, လုပ်ဆောင်မှု
Academic Writing Course ပ်ိတ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြီးစီး။
၁၇ ရက် ၊ ၉ လပိုင်း ၊ ၂၀၁၈
A.S.M.A ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့(ထိုင်းနိုင်ငံ)၏ ပညာရေး Project တစ်ရပ်အနေဖြင့် ကျောင်းသားရဟန်းတော်များ၏ ပညာရေး မြင့်သထက်မြင့်မားစေရန်ရည်ရွယ်၍ Language institute of MCU နှင့် A.S.M.A တို့ပူးပေါင်းပြီး ၁၀. ၈. ၂၀၁၈ မှစတင်ကာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ Mr.Alexander Willis (M.Ed.ELT) နှင့် Academic Writing Course သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခဲ့သည်။
ယနေ့ ၁၇. ၉. ၂၀၁၈ နေ့တွင် AWC သင်တန်းဆင်းပွဲတစ်ရပ်ကို မဟာချူလာတက္ကသိုလ်ကြီး၏ ငြိမ်းချမ်းရေးခန်းမဆောင်တွင် အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။
ယနေ့ကျင်းပသော သင်တန်းဆင်းပွဲကို Language institute of MCU မှဦးဆောင်ကျင်းပပေးပြီး သင်တန်းပြီးဆုံးအောင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသော သင်တန်းသားများအားလည်း Language institute of MCU မှ ဂုဏ်ပြု သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များပေးအပ်ခဲ့သည်။
အခမ်းအနားတွင် သင်တန်းဆရာ Mr.Alexander Willis (M.Ed.ELT) ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်းခဲ့ပြီး ASMA-ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်မှ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ယခုလို့ A.W.C သင်တန်းကို Language Institute of MCU နှင့် ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ခွင့်ရသည့်အတွက် လွန်စွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းနှင့် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
Phra Maha Cittapalo, Vice Director of Language Institute of MCU and Director of Student Affairs ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်၍ အမှာစကားများပြောကြားခြင်း နှင့် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ပေးအပ်ခြင်းတို့ ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Phra Maha Cittapalo, Vice Director နှင့် သင်တန်းဆရာ Mr.Alexander Willis (M.Ed.ELT)တို့အား ASMA မှ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပြီး အမှတ်တရစုပေါင်းဓါတ်ပုံများရိုက်ကာ အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာပိတ်သိမ်းခဲ့ကြသည်။
၁၇ / ၉ / ၂၀၁၈
အမျိုးအစား ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း, လုပ်ဆောင်မှု